Fa vendrana ve ny Firantsay na dia fikirintsika mafy aza?
2008-07-31 @ 11:57 in Toekarena
Neritreritra lalina ny amin'ny fampianarana ho teny malagasy na ho teny firantsay ny zaza malagasy aho dia nahita ny tsoa-kevitra fa tsy any amin'ny teny ampianarana ny zaza velively ny olana fa any amin'ny zavatra ampianarina ny zaza Malagasy.
Fifaliana sy reharehantsika hatramin'izay ny fananana zanaka tafita amin'ny fianarana na lasa ambonimbony ihany vao mijanona nefa ny tontolon'ny asa miandry azy mampahonena. Dia raikitra amin'izay ny fiampangana ny teny ampianarana ho fototry ny olana. Dia lazaina fa hafa ny fampianarana taloha hoy ny ray aman-dreny efa antitra amin'izao fotoana izao. Ny tena maridrefy nitsapana ny fahaizana anefa tamin'izany fotoana izany dia ny fahaizana teny firantsay. Ny vitsy anisa toa anay indray dia mikikitra mafy fa nanana izay fahaizanay ihany koa izahay na dia ambanimbaniana fatratra aza ny fampianarana tamin'ny teny malagasy tamin'ny androny ary na dia tsy nety resy lahatra ihany koa aza ny mpampianatra anay tamin'izany fotoana izany.
Rehefa nifandrombahana ny ho mpiasam-panjakana ambony na ho mpifehy sy mpitantana amin'ny orinasa dia izay tena havanana amin'ny teny firantsay tokoa sy izay efa manana mpanohana mialoha. Ankehitriny aza dia mbola ampanofinofisana ny ampitsangatsangana any andafy ny mpianatra mpanala fanadinana. Nefa bebe ihany araka ny hitako tamin'ny manodidina ahy no manana izany baccalaureat nefa dia "agent de securité" sisa na "planton" no sahaza azy any amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Dia inona izany no mahasamihafa ny nianatra sy ny tsy nianatra?
Zavatra iray nahatalanjona ny saiko mandraka ity androany ny hitako eto amin'ny tanàna misy ahy. Malaza amin'ny fisian'ny karazam-piaviana rehetra moa ny tanàna misy ahy. Ankehitriny dia feno karana sy vazaha ary indrindra indrindra ny shinoa sy ny kely maso eto amin'ny tanàna. Rehefa miresaka vazaha aloha dia tsy fantatra mihitsy izay fototr'asan-dry zalahy sy izay tena ataon-dry zalahy. Dia ny mitilitily vehivavy ihany no tena anton-dia nefa enga anie ho diso izany fanombanako izany. Rehefa miresaka karana indray dia tsy ilay mpivarotra entana Analakely tsy akory fa mpivarotra hanimasaka indray. Saiky izay daholo ny ataon-dry zalahy sy ry zavavy. Fa rehefa Shinoa indray na dia mijorojoro eo ambaravarana fotsny aza izy dia fividianam-bato avy hatrany no ao an-tsain'ny manodidina. Tsy misy soratra akory aza eo anoloan'ny trano fa mahita latabatra sy seza ary fandanjana fotsiny ianao dia fantatra avy hatrany fa hividy vato no ataony eo. Andro roa voalohany ihany izy no toa nijorojoro fa nanomboka ny andro fahatelo dia mitanjozotra avokoa ny gasy tsy ampoizina rehetra mitondra ny vatony. Izaho amin'io mivanàka fotsiny, misy aza ny fotoana fa mitety trano mihitsy na entin'ny mpanera ireo shinoa ireo hanao raharaham-bato aminy.
Teo aho dia nitodika tany amin'ny lasa indray ny saiko, Ilakaka no toa nahatongavana an-tsaina. Ilakaka manamorona ny lalam-pirenena izany hoe tena fandalovana tsy maintsy nisy fanamboaran-dalana... fa fandraofana vato nataon'ankizy no nahafantarana fa hay feno safira ity toerana ity. Dia tsy hitan'ny Firantsay tamin'ny nanamboarana ny lalana ve ny safira nikararana tamin'io toerana io? Sa tsy fantatry ny Firantsay ny lanjan'ny safira eo amin'ny tsena? Efa voatonona ao amin'ny baiboly hatry ny ela ny fisiany fa volamena ihany angamba no akora voajanahary fantatry ny Firantsay, dia izay ihany koa no niononantsika. Jerena fa feno vato i Madagasikara, vato be vidy. Iza no nahalala raha toa ka efa nandakandaka 10 000 000Ar teny an-dalana teny aho fa tsy nahalala ny sandan'ilay vato nodakadakana? Nefa iza no nampianatra antsika ny vato sy ny lanjany? raha nisy tamin'ny fotoana nianarako manontolo dia ora enina ihany angamba farafahabetsany. Ampy hahalalana inona moa izany?
Teo aho no lasa lavitra ny saiko: fa dia inona no tena nampianarina ahy sy nandaniako ny androm-pahazazana? Fianarana mba ho mpiasam-panjakana sa ho mpiasam-bazaha sa ho mpiasa fotsiny ihany? Firifiry ny olona no nahay tamin'ny fianarana nefa variana fa toa ny tsy nianatra indray no toa manam-bola sy nahay nihary kokoa noho izy ireny? Misy moa dia zavatra tsy mifandraika amin'ny fianarana norantovina mihitsy no natao rehefa miasa? Dia inona izany no mahasamihaf any nianatra sy ny tsy nianatra? Teo aho resy lahatra tanteraka fa ny zavatra nampianarina no tena olana fa tsy ny teny ampianarana velively! dia mbola hotohizana ve ny fampianarana ny taranja toa tsy misy ifandraisana amin'ny zavamisy Malagasy sy tena ampandrosoana an'i Madagasikara? Soratra nataotao foana tao anatin'ny 20 minitra ihany ity fa ho hita ihany izay fivoarany.